के तपाइको छाला यसरी चाउरी पर्छ ? यस्ताे छ खास कारण - Purbeli News
के तपाइको छाला यसरी चाउरी पर्छ ? यस्ताे छ खास कारण
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २१, २०७६ समय: १९:२९:००
शरिर हुने विभिन्न बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताइन्छ। पानीमा रहँदा हाम्रो छालाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन्, अर्थात ओस्मोसिस, जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ।
सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धानको क्रममा यस्तो परिवर्तन बाँदरमा पनि भेटेका थिए। यसको एउटै अर्थ हुन्छ कि पानीमा हाम्रो पकड बलियो होस्।
ताईवानमा भएको अर्को प्रयोगमा भिजेको हातले सामान उठाउन झन् गाह्रो हुने नतिजा निकालियो। तर जब चाउरी पर्ने गरी हात वा खुट्टा भिजाइयो र चाउरी परेको हातले कुनै पनि वस्तु समात्न सहज हुने थाहा भयो, तब शरिरले वातावरण अनुसार आफुलाई ढाल्ने रहस्य खुल्यो।